News - A Self Loading Concrete Mixers na-apụghị ịjụ
A Self Loading Concrete Mixers-apụghị ịjụ
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya oru injinia, Self Loading Concrete Mixersr na-arị elu. Ma n’obodo, n’obodo, ma ọ bụ n’elu ugwu, ị nwere ike ịhụ mgbe ọ bụla ọ dị obere ka ọ na-agbanwe, ọ na-agbanwe agbanwe, na-eri nri dị ọcha ma na-akpaghị aka, na-agwakọta akpaka, na-ebugharị onwe ya, ma na-ebutu akpaka. Ọtụtụ ndị na-azụkarị ha. Kedu uru ndị dọtara ọtụtụ mmadụ? Ka anyị lebakwuo anya na uru ya.
1. Otu ụgbọ ala nwere ike ijide ụgbọ ala atọ
The Self Loading Concrete Mixers nwere ike ibu, mix, ibufe, na-agbapụta n'ahụ na a ofu ebe. Ọ na-anọchi akụkụ nke ọrụ nke ndị na-ebu ibu, ndị na-agwakọta, ndị na-ebu gwongworo, na ụgbọala mgbapụta. Fọdụ ndị ajụọla ihe dị mkpa na ndị na-etinye onwe ha na ndị na-agwakọta onwe ha n'ihi na ọ dịka ihe ọ bụla, anaghị eji ya n'efu. Mana arụmọrụ ahụ gosipụtara na ọ bụghị naanị mma, kamakwa ọ dị mma. Amuru ya ka o meputa ihe ma dozie nsogbu gbara ya gburugburu.
Abụọ, arụmọrụ nghọta igwekota
2.Ka 4.0 square igwekota ihe atụ, nkezi nke otu tank nke ihe onwunwe na-atara ọ bụla 12 nkeji, na mgbe awa 8 nke ọrụ, kwa ụbọchị ihe mmepụta nwere ike iru 500 tọn, nke bụ ọtụtụ ugboro ihe oru oma karịa nanị iji igwekota.
3. You nwere ike ịzụta ụgbọ ala ọzọ na ego echekwara
Ọnụ ego echekwara site na Self Loading Concrete Mixers bụ ụgwọ ihe na ụgwọ ọrụ.
Anọ, nwere ike gbagoo ugwu, gbadaa n’olulu ma jee ije n’elu ugwu
Ga ugwu siri ike maka nnukwu tanker, mana ọ dị mfe maka ndị na-etinye ihe na-eme ka ihe na-adịghị mma.
Igwe dị larịị dabara adaba maka ndị na-etinye ihe na-eme ka ndị na-ejide onwe ha. Ọ nwere ike ịhazi "igwe plateau" nke na-ezute ebe mpaghara maka ndị ọrụ. Olee otú Self Loading Concrete Mixers “magburu onwe” na ndagwurugwu, na otú ọ pụrụ ịbụ "magburu onwe" na ala ugwu. Gwuo ”.
Nke ise, na-ekwupụta ime obodo “anaghị anabata”
Okporo ụzọ gbagoro ugwu ahụ agbagọghị agọ, ụzọ ahụ abanyekwa n’obodo ahụ dị warara. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ọrụ akụrụngwa n’ime ime obodo na-aga n’ihu, dịka ịrụ ụzọ na ime ka mgbamaka nke pavụ, mmezigharị ụlọ ochie, wdg, nke ọ bụla n’ime ha na-egosi mbata nke ndụ ọhụụ maka ndị bi n’ime obodo, mana ụzọ a na-abanye n’ime ime obodo bụ. ọbụghị nke ahụ dị mfe, ọbụghị naanị olulu, kamakwa ọ dị warara. Dị ka o kwesịrị ịdị, nnukwu ụgbọ mmiri tanker enweghị ike ịba, mana Self Loading Concrete Mixers nwere ike ịnagide ụdị "ụzọ adịghị anabata" ụdị a n'ụzọ dị mfe.
Na mkpokọta, Self Loading Concrete Mixers na-arụ ọrụ nke ọma, na-echekwa ego, na-egosipụta ya, yana nchekwa dị elu. Ha na-arụ ọrụ dị oke mkpa na obere na ọkara-oru, ya mere ha na-ewu ewu.
Post oge: Nov-26-2020
Onwe-Loading igwekota gwongworo, Cement igwekota agbapụtara Concrete, N'ụzọ igwekota, 2021d Wheel Ibu Ibu, Bell Ibu Ibu, Anyịnya Ibu anọ,